Ingabe inombolo yami yokuphepha komphakathi nokuthi ungayithola kanjani impinda | Ezezimali Zomnotho
Inombolo yokuphepha komphakathi Cishe ungomunye wemibhalo ebaluleke kakhulu sonke okumele sibe nayo, ngoba imvamisa iyadingeka lapho kwenziwa izinqubo ezilandelanayo. Uma ufuna ukwazi ifayela lakho le- inombolo yokuhlanganiswa kwezokuphepha komphakathi, Ngokulandelayo sizokutshela ukuthi ungayithola kanjani ukuze ukwazi ukwenza noma yiluphi uhlobo lwenqubo.
1 Iyini Inombolo Yezokuphepha Komphakathi?
2 Ngubani ongathola inombolo yokuphepha komphakathi?
3 Ngazi kanjani ukuthi iyiphi inombolo yami yokuphepha komphakathi?
4 Icubungulwa kuphi inombolo yokuphepha komphakathi?
5 Yini engiyidingayo ukucubungula inombolo yami yokuphepha komphakathi?
6 Ukulungiswa kunombolo yokuphepha komphakathi
7 Impinda yedokhumende yokuhlangana kwezokuphepha komphakathi
Iyini Inombolo Yezokuphepha Komphakathi?
El Inombolo yokuphepha Komphakathi, Eyaziwa nangokuthi inombolo yokuhlanganiswa kwezokuphepha komphakathi, iyinombolo ehlukile enamadijithi ayi-9 futhi okuyisibopho kuzo zonke izakhamizi zaseSpain ezicabanga ngokusebenza. Ngokunjalo, bonke labo bantu abazuza impesheni noma, lapho kufanele khona, umhlomulo, banesibopho sokuthola le nombolo yokuphepha komphakathi.
Ukuqondisisa, Ngaphandle kwenombolo yokuphepha komphakathi, umuntu akakwazi ukwenza noma yiluphi uhlobo lomsebenzi okhokhelwayo Futhi uma wenza, uzobe ukwenza ngokungemthetho. Ukungabi nale nombolo kusho ukuthi isakhamuzi asihlangene nenqubo yokuphepha komphakathi ngakho-ke asikwazi ukufinyelela kuzo zonke izinzuzo ezinikezwa yilesi simiso.
Le nombolo iyadingeka kubantu lapho befuna umsebenzi, lapho ekugcineni bewuthola noma lapho nje befuna ukubhalisa ku-Employment Service.
Ngubani ongathola inombolo yokuphepha komphakathi?
Zonke izakhamizi ezihlala ngokusemthethweni eSpain zingathola inombolo yokuxhumana yokuphepha komphakathi. Ezinkampanini, abasebenzi bangathola lo mbhalo njengoba kudingeka kubo ukuthi benze noma yimuphi umsebenzi. Futhi, le nombolo ingatholakala nge Abaqondisi BesiFundazwe boMgcinimafa Jikelele Wezokuphepha Komphakathi noma ngokusebenzisa ukuphathwa.
Kuyafaneleka ukusho ukuthi le nombolo yokuphepha komphakathi ayitholakali kuphela lapho uqala ukusebenza. Abantu abangakaze banikele noma abancane, bangaba ne- inombolo yokuhlanganiswa kwezokuphepha komphakathi. Okwamanje lapho umuntu athi uqala noma yimuphi umsebenzi womsebenzi, leyo nombolo iba inombolo yokuhlangana enquma ukufakwa kwabo ohlelweni lokuphepha komphakathi.
Kubalulekile ukusho ukuthi awukwazi ukuba nezinombolo eziningi zokuphepha komphakathi, noma ngabe kuyiqiniso ukuthi kunezimo lapho abantu benenye inombolo yokuphepha komphakathi ngenxa yephutha lokuphatha. Lapho kwenzeka into enjengale, okwenziwa yi-Social Security ukuxhumanisa zonke izinombolo futhi unqume eyodwa kuphela njengeyona eyinhloko, imvamisa leyo esetshenziswa kakhulu kusistimu.
Kumele futhi kucaciswe ukuthi inombolo ekhonjiswe ekhadini lezempilo akuyona inombolo yokuphepha komphakathi. Okwenzekayo ukuthi inombolo evela ekhadini yenziwe ngokuya ngenombolo yokuphepha komphakathi. Kungakho izinombolo zifana ngokujwayelekile, kepha ekhadini aboniswayo izinombolo ezimbili ezingeziwe ezihambisana nekhodi lesifundazwe lapho ukuhlangana kohlelo kwenzeke khona, kanye nenombolo elandelanayo.
Uma incwadi B ikhonjiswa ekhadini lezempilo, ngemuva kwalokhu kulandelana, lokho kusho ukuthi lowo muntu uthola ukwelashwa njengomzuzi, kufaka phakathi owakwakhe ongenayo imali noma izingane ezingasebenzi, kumuntu onelungelo lokuyithola ezabo ezifanayo. Noma ngubani angabhalisa ukuthola inombolo yokuphepha komphakathi, futhi kungenzeka ukuthi uzikhiphe ohlwini.
Hhayi lokho kuphela, okwakhe uhlelo lokuphepha komphakathi lunamandla okukhansela inombolo eshiwo uma kwenzeka kunqunywa ukuthi yanikezwa ngaphandle kokuthola ilungelo lokuyithola.
Ngazi kanjani ukuthi iyiphi inombolo yami yokuphepha komphakathi?
Ukuthola ukuthi yini inombolo yakho yokuphepha komphakathi, kufanele ngabe usemsebenzini, noma, uma kusebenza, wake wasebenza phambilini. Kulokhu uzoba nezindlela eziningana zokubheka ukuthi iyini inombolo yakho yokuhlanganiswa kwezokuphepha kwezenhlalo ngokusebenzisa ikhadi lakho lezempilo, ukukhokhelwa kwebhange, phakathi kwabanye.
Enye yezindlela ezilula zokwazi inombolo yakho yokuphepha kwezenhlalo ukushayela inombolo yocingo yamakhasimende: 901502050 XNUMX XNUMX. Kule nombolo, umuntu okuhambela uzokunikeza uhlelo ukuze ukwazi ukuya ngqo ehhovisi lezokuphepha komphakathi futhi thola inombolo yakho.
Manje, uma usebenza njengamanje, kumholo wakho ungathola nenombolo yokuphepha komphakathi. Imvamisa uyithola isiphezulu phezulu kwabasebenzi futhi akunandaba ukuthi ngabe iholo elidala yini, ngoba inombolo yezokuphepha kwezenhlalo ayishintshi, ihlala ifana.
Ngokwengeziwe, ungayazi inombolo yakho yokuphepha komphakathi, ungayithola kwimibhalo yezokwelapha, ngoba lolu lwazi nalo luvela lapho. Izinkontileka zokuqashwa ezisayinwe nenkampani, le nombolo iyakhonjiswa.
Ungathola nokuthi iyini inombolo yakho yokuhlanganiswa kwezokuphepha kwezenhlalakahle ngokuya esikhungweni seziguli ezingalali bese umane uyicele, kepha kulokhu kufanele wethule i-ID yakho.
Ungaya futhi kuMgcinimafa Wezokuphepha Komphakathi ukuze uthole lolu lwazi, kanye nempinda yekhadi lezempilo.
Ngaphezu kwalokho, i Ungathola futhi nenombolo yakho yokuphepha ngokungena kuwebhusayithi futhi usebenzise insiza ethi "Duplicate Ubulungu Bombhalo", okwenziwa ngendlela ngomyalezo wombhalo weSMS. Lokhu kwenzeka uma umuntu onentshisekelo phambilini enikeze uMgcinimafa Jikelele Wezokuphepha Komphakathi inombolo yocingo ephathekayo.
Lapho isicelo sekhodi senziwe, lo muntu uthola umlayezo wombhalo weSMS, ozobavumela ukuthi bathole inombolo yezokuphepha komphakathi, bayiphrinte noma bamane babuze yona.
Icubungulwa kuphi inombolo yokuphepha komphakathi?
Manje njengoba sikukhombisile ukuthi ungayithola kanjani inombolo yakho yokuphepha komphakathi, yisikhathi sokukhuluma ngokuthi ungayithathaphi inombolo yakho yokuphepha komphakathi. Okokuqala, kubalulekile ukuthi wazi ukuthi uma ungakaze usebenze phambilini futhi ufuna ukuqala ukusebenza, kunoma yimuphi umsebenzi uzocelwa lo mbhalo.
Into ejwayelekile ukuthi kufanele ugcwalise isicelo ozodingeka usethule ku- Ukuphathwa koMgcinimafa Jikelele Wezokuphepha Komphakathi. Kulesi sicelo kufanele ucacise ikheli lenkampani ohlose ukuyisebenzela. Ungakhohlwa ukuthi zonke izicelo zokubandakanywa kwezokuphepha komphakathi kufanele zenziwe ngaphambi kokuqala ukusebenza.
Yini engiyidingayo ukucubungula inombolo yami yokuphepha komphakathi?
Zonke izicelo zokubhalisa ngohlelo lokuphepha komphakathi kufanele ziqukethe imininingwane ephathelene nokwenza umsebenzi ozowenza. Ngale ndlela, ucelwa imininingwane elandelayo:
Igama noma igama lenkampani elikhuthaza ukubhaliswa
Ikhodi ye-Akhawunti Yokunikela Inkampani
Kufanele futhi ucacise iSikimu Sokuphepha Komphakathi
Amagama nezibongo zakho eziphelele
Idethi yokuqala umsebenzi
Ukulungiswa kunombolo yokuphepha komphakathi
Kwesinye isikhathi kuyadingeka ukuthi wenze izinguquko kunombolo yokuphepha komphakathi, lapho kufanele uye ku-Administration ehambisanayo ye-General Treasury of Social Security. Kanye nokwethulwa kwe-DNI, yonke imibhalo efakazela isidingo sokushintsha inombolo yokuphepha komphakathi nayo kufanele yethulwe.
Uma kwenzeka kukhona umbuzo maqondana ne- ikhadi lezempilo, lapho-ke kuyadingeka ukuthi uye esikhungweni sokunakekelwa okuyisisekelo noma emtholampilo wabalalayo kwi-Autonomous Community ehambisanayo.
Impinda yedokhumende yokuhlangana kwezokuphepha komphakathi
Le yisevisi enikezwa yingosi esemthethweni ye-Administration of the General Social Security Treasury futhi evumela labo abanentshisekelo, hhayi kuphela ukuthola, kodwa futhi nokuphrinta noma, lapho kufanele khona, babonane nge-inthanethi, impinda yesikhashana yenombolo yokuphepha komphakathi.
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi le nsizakalo igxile kuphela kulezo zakhamizi esevele zinenombolo yokuxhumana yokuphepha kwezenhlalo eyabelwe. Isevisi ikuvumela ukuthi ubuke ngokushesha futhi uthinte impinda yesikhashana yenombolo yokubambisana kwezokuphepha komphakathi, eyaziwa nangokuthi yincwadi yokuhlangana.
Kungakhathalekile ukusetshenziswa okuhlosiwe, insizakalo ivumela abathintekayo ukuthi balande lo mbhalo ngefomethi yefayela le-PDF noma, lapho kufanele khona, bamane bawuprinte ngqo kwi-Intanethi.
Idokhumenti iqukethe imininingwane elandelayo yomuntu oyicelayo:
Idatha ekuhlonzeni i-DNI noma i-NIE
Inombolo yokuphepha komphakathi, noma uma kwenziwe imisebenzi yomsebenzi eholela ekubumbeni uhlelo lokuphepha komphakathi, inani lokuzibandakanya kohlelo lokuphepha komphakathi.
Ngaphezu kwalokhu okungenhla, insiza isebenza kuphela uma kuhlangatshezwana nezidingo ezithile ezijwayelekile, phakathi kwazo okusebenza uhlelo oluhle, okungaba yiWindows, iLinux neMac, kuzinguqulo zabo zakamuva, iziphequluli zewebhu ezinjengeMicrosoft Edge, iGoogle Chrome, IFirefox, kanye nomshini obonakalayo weJava 6 noma inguqulo ephezulu.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Umsebenzi » Iyini inombolo yami yokuphepha komphakathi nokuthi ungayithola kanjani impinda
Bangakhombisa ukuthi inombolo ye-SS itholakalaphi ekhadini lezeMpilo, iyona elula kunazo zonke ...